Nkwurịta okwu: nyiwe maka GNU / Linux Operating Systems | Site na Linux
Nkwurịta okwu: nyiwe maka GNU / Linux Operating Systems
Nkọwapụta Nkwukọrịta Otu maka GNU / Linux
Ojiji ndi mmadu nwere iji kwurita okwu, nwee obi uto ma mata ya, dika Redio, TV na Intanet bu ihe kachasi mkpa maka otu ihe. N'ihe gbasara thentanetị, Ojiji nke mgbasa ozi ọha na eze ma ọ bụ ndị nwere mmasị na-achọ iji ngwa kwesịrị ekwesị nke na-enye ohere njikwa nke oke ma ọ bụ nkwukọrịta otu.
N'ihe banyere inwe GNU / Linux Operating Systems, enwere Igwe Nkwukọrịta Otu na-akwado nkwupụta mmadụ na mmadụ ma ọ bụ otu, site n'ụzọ dị iche icheya bu ide / guo, olu ma obu vidiyo. N'ime akwụkwọ a, anyị ga-ekwu ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa ma jiri ya rụọ ọrụ.
1 Okwu Mmalite na Nkwurịta Okwu Ngwa
2 Nkwurịta Okwu Ngwa
2.1 Ozi dialog
2.3 Facebook ozi
2.5 Ihe anakpo
2.9 Mkparịta ụka Roket
2.12 Egwuregwu Team
2.19 Igbe mbata
2.20 Desktọpụ WhatsApp
2.23 Yak Yak
2.24 Zulip Nkata
Okwu Mmalite na Nkwurịta Okwu Ngwa
Ngwa nkwukọrịta ma ọ bụ nyiwe emeela ka mmadụ na mmadụ kwalite nkwukọrịta ịbụ ndị bara oke uru site na ikwe ka nkwukọrịta dị irè na nke ọma dị n'etiti ha site na ebe ọ bụla na mbara ala nwere ohere ịntanetị na ezigbo oge site na ọtụtụ ọwa nkwukọrịta.
N'okwu n'ozuzu, ngwa niile ma ọ bụ nyiwe nkwukọrịta na-akwado ndụ kwa ụbọchị n'ihi na ha na-ebelata ịdị anya ma na-ebelata oge nzaghachi., ma n'aka nke ha na-emetụta ọdịbendị na ụzọ ụmụ mmadụ si akpa àgwà, ọkachasị ndị na-eto eto n'ihi mmetụta nke netwọkụ mmekọrịta na iji ịntanetị.
Nkwurịta Okwu Ngwa
Nkwukọrịta nkwukọrịta ma ọ bụ nyiwe abụrụla ebe ndị ọzọ eji eme ihe iji nwekwuo ogo nke nkwukọrịta site na forntanetị maka ọtụtụ gburugburu ụwa. Ngwa ndị egosiri n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha eji eme ihe na-abịa site na nkwado ụmụ amaala (ndị ahịa desktọọpụ) maka GNU / Linux Operating Systems:
Ikuku nkwukọrịta nke oge a ma dị mma nke na-enye ohere: nkata, otu, ọwa, oku ọdịyo na njirimara olu. Ọ nwere mfe iji interface na dakọtara na chatbots. Akpan iji maka na ngwaọrụ dị iche iche lekwasịrị anya na mpaghara azụmahịa, ọ nwere ọtụtụ arụmọrụ bara uru.
Ọ bụ ngwa nkwukọrịta site na ederede ma ọ bụ olu, n'ụdị «WhatsApp». Ọ pụtapụtara dị ka ngwa nkwukọrịta site na ederede ma ọ bụ olu maka ndị gamer community (community of gamers), site n'igosi ikike nkwukọrịta ngwa ngwa ya, yana nchekwa nzuzo zuru oke, na ikwe ka ịmepe sava / ọwa (otu) ebe ha nwere ike ịmekọrịta ọtụtụ ndị ọrụ n'enweghị nsogbu na karịa ihe niile n'efu.
Ọ bụ ngwa izipu ozi nke Facebook, nke na-enye gị ohere ịmalite mkparịta ụka edere n'etiti kọntaktị (ndị enyi) nke netwọkụ mmekọrịta Facebook. Ọ na - enye gị ohere izipu ma nata ozi ederede, ọ na - enye gị ohere ịkekọrịta onyonyo ma ọ bụ ọnọdụ ala anyị n'ime ozi ederede, na - enwe ike tinye ọtụtụ ndị nnata ma mepee windo nkata na ọtụtụ mmadụ n'otu oge. Enwere ike ihu ihe nke onye ahịa desktọpụ a sitere n'ụzọ ndị ọzọ n'ime netwọkụ mmekọrịta.
Ọ bụ multiplatform, nweere onwe ya ma mepee ahịa nke na-arụ ọrụ na Izi Ozi ozugbo (IM, na Bekee), nkata olu na vidiyo na ịntanetị. Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ usoro mgbasa ozi ịntanetị na Telephony kachasị ewu ewu na nke a na-ejikarị, gụnyere Jabber / XMPP na SIP Voice over IP (VoIP) protocol, n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ na nzuzo nzuzo ọzọ maka IM site na usoro OTR (Off-the-Record) yana maka olu na vidiyo vidiyo site na ZRTP na SRTP.
Multiplatform ahịa nke na-eji ụkpụrụ ọkọlọtọ SIP maka nkwukọrịta VoIP ma nwee ikikere n'okpuru ikike GNU GPL. Maka GNU / Linux, etinyere interface ya na GTK +, ọ nwekwara ike ịgba ọsọ na ọnọdụ njikwa. O dikwa na nkwekorita ITSP dikwa nfe na enye ohere ikwuputa olu efu, vidio na izisa ozi ozigbo.
Ọ bụ ngwa mkparịta ụka olu na-emeghe, nke ejiri ịdị larịị na ịdị elu ya, nke e mere iji mee ihe na nnọkọ vidiyo ma ọ bụ nzukọ n'oge nnọkọ otu maka egwuregwu ma ọ bụ nzukọ ọrụ, dị ka ajụjụ ọnụ. Mumble bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ya mere ọ bụ n'efu ma nwee ikikere na - agbanwe agbanwe.
Ọ bụ olu echedoro ma kesaa olu, vidiyo, na nkata nkwukọrịta nkata na-achọghị nkesa na-achịkwa ma hapụ ikike nke nzuzo n'aka onye ọrụ. bụ ngwanrọ mepere emepe maka nkwukọrịta nke na-enye ndị ọrụ ya ohere ịkpọ oku ọdịyo ma ọ bụ vidiyo ma zipu ozi n'enweghị nsogbu na nnwere onwe, na nzuzo. Enwere ike ijikọ ya na ọrụ ekwentị ma ọ bụ jikọta ya na ngwaọrụ ekwentị ọ bụla nwere njikọ.
Naa bụ onye na-ezisa ozi Internetntanetị na-enye ohere njikọ na nkwukọrịta nkwukọrịta wuru na-emeghe ụkpụrụ nke matrix.org, nke na-enye ohere ịkọrọ ndị ọrụ na ụlọ nkata nke ngwa niile ejiri jikọtara Matrix platform, dị ka IRC na Slack, na ndị ahịa ọ bụla kwekọrọ na Matrix. N'ihi ya, Riot bụ isi mmalite nke usoro okike zuru ụwa ọnụ na nke mepere emepe. N'ihi usoro iwu ụlọ ya ketara n'aka Matrix, na nkwado ya maka izo ya ezo na njedebe, Riot na-agba mbọ iwepu nchegbu a ma mee ka nzuzo bụrụ nke abụọ. Ọgba aghara bụ ihe na-emeghe ma na-eme ka ọhụụ ọhụrụ, mgbanwe dị ukwuu, na njikwa maka ndị chọrọ nyocha, gbasaa koodu, ma nye aka na obodo.
Mkparịta ụka Roket
Ikpokoro a Mfe ma dị ike emeghe iyi weebụ chat nwere multiplatform Desktop Client na awade ihe magburu onwe ya ọtụtụ ngwá ọrụ na atụmatụ. N'etiti atụmatụ ya bụ na enwere ike ịhazi ya nke ọma, kwe ka Nkata Live, Videoconferencing, Filekekọrịta Faịlị, Nnọchite Math Tex na Nnyocha ihuenyo n'etiti ndị ọrụ.
Ọ bụ ikpo okwu nkwukọrịta otu na-enye ohere nkwukọrịta oge n'etiti ndị otu, na-enye ha ohere itinye akwụkwọ yana ọbụlarị nkata nzuzo, nke mere na ọ nweghị ihe mpụga nwere ike ịdọpụ uche otu ahụ na-arụ ọrụ n'ụzọ achikota, na-ahapụ akara nke ọrụ niile. . Ọ bụ ebe nchekwa na-adịghị agwụ agwụ enwere ike ịnweta ozugbo ọrụ ahụ zuru ezu ma nyochaa mgbakwunye, ozi, ihe mejọrọ na ihe gara nke ọma.
Ọ bụ ngwa multiplatform nke na-enye onye ọ bụla ohere ikwukọrịta, site na ịnweta akaụntụ email nke ụlọ ọrụ Microsoft (Outlook, Hotmail, na ndị ọzọ), na-akpọ onye ọ bụla na otu oku na oku vidiyo, na-ezipụ ozi ozugbo na ịkekọrịta faịlụ n'etiti ndị ọzọ na-eji Skype. O nweere onwe ya ibudata ma ọ dị mfe iji, na mgbakwunye, ịkwụ ụgwọ ntakịrị na-enye gị ohere ịkpọ ekwentị ma zipụ ozi SMS.
Ọ bụ nkwukọrịta nkwukọrịta nke na-enye ohere, site na onye ahịa desktọọpụ ya ọtụtụ, ịrụ nkata olu na ịntanetị (IP), na-enye ndị ọrụ ohere isoro ndị ọrụ ndị ọzọ kwurịta okwu na ọwa, dịka a na-eme na mmemme dị ka Skype. TeamSpeak Client dị ọkụ karịa ndị ọzọ yiri ya ma nwee usoro nke ọwa iji kpaa nkata, chọọ ihe, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ọrụ ndị ọzọ mmemme a na-enye anyị bụ na anyị nwere ike mepụta ọwa nwa oge nwere paswọọdụ wee nwee ike ịbanye ndị anyị chọrọ ikwu. O nwere nchebe dị ukwuu, na-enye ohere ịnyefe faịlụ, nwere ọrụ nkata nke na-eme ka nkwukọrịta dị mfe nke URL na data ederede ndị ọzọ.
Ọ bụ nkwukọrịta nkwukọrịta nke na-enye ohere site na onye ahịa desktọọpụ na mbara ọtụtụ ya na, dịka ọtụtụ ndị ọzọ, na-enye ohere izipu ozi ederede dị elu, foto, vidiyo, oku na vidiyo, ịkpọ aha, iziga faịlụ GIF na akwụkwọ mmado ama ama ha. Ọ bụkwa ngwa nke ga-enwere onwe ya mgbe niile, n'ihi na ọ sitere n'ike mmụọ nsọ site na isi mmalite, nke na-eme ka ikpo okwu ya nwee nchedo site na nzuzo siri ike na igwe ojii.
Ọ bụ ngwa nke onye ọrụ desktọọpụ na-ejikọ ndị ọrụ yana oke nchekwa na nzuzo, ya bụ, na ọnụ ọgụgụ dị elu nke na ọ dịghị onye ọzọ na-ege ntị ma ọ bụ na-etinye aka na nkwukọrịta. Ọ bụ ezie na a na-akwụ ụgwọ ọrụ ndị ọzọ a ma ama maka otu ogo ahụ, Tox bụ n'efu ma na-abịa ad-n'efu maka ndụ. Tox bu oru FOSS (Ohere efu na emeghe). Ọ bụ ebe mepere emepe na mmepe niile mepere emepe, ọ bụ ndị mmepe afọ ofufo mepụtara ya bụ ndị na-etinye oge ha n'efu na ya, yabụ enweghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ iwu ọzọ n'azụ ya.
Ọ bụ ngwa nkwukọrịta multiplatform nke nwere ọtụtụ ịkpọ oku na atụmatụ izi ozi, nke na-enye ohere ndị na-enweghị ngwụcha maka ndị ọrụ ya igosipụta onwe ha na njedebe. Ọ na-enye ohere izipu ederede, foto, vidiyo, oku ọdịyo na oku vidiyo dị mma, mkpado na izipu faịlụ GIF maka ezigbo nkwukọrịta na-atọ ụtọ. Ọ na-enyekwa ohere ịmepụta obodo (otu) iji kwado njikwa mkparịta ụka na ọnụọgụ ndị otu na - akparaghị ókè, na nhichapụ ozi n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Enwere nyiwe ndị ọzọ nwere ma ọ bụ na-enweghị ndị desktọọpụ desktọọpụ maka GNU / Linux ma ọ bụ Multiplatform nke nwere ike ịba uru dabere na nkwukọrịta gị chọrọ, dịka:
M na-akpọ gị òkù ka ibudata, gbalịa ma jiri ụfọdụ iji melite ogo gị nke nkwukọrịta, nchekwa, nzuzo na nkasi obi na ịntanetị. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị ngwa ọ bụla maka GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ gị, lee anya na blọọgụ ọzọ a maka otu: Ngwa dị mkpa ma dị mkpa maka GNU / Linux 2018/2019
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nkwurịta okwu: nyiwe maka GNU / Linux Operating Systems
Daalụ mana ,,,
Ọ ga-amasị m karịa ma ọ bụrụ na ị mebere ngalaba abụọ, otu nke mbụ na ngwa FOSS na nke abụọ na ndị nwere ya, na njedebe tebụl nke njirimara.
Ihe ị dere banyere mgbanaka na paragraf ikpeazụ a aghọtaghị nke ọma, echere m na ọ ga-aka mma ide ya n'ụzọ a:
Nwere ike ịhazi nọmba ekwentị IP gị dị na ya - ọ bụrụ na inwere ya - site na ịkpọ ma ọ bụ ịza site na ebe ọ bụla ịchọrọ site na ọnụ ọgụgụ nọmba nke tebụl gị na ọnụego ya belata na / ma ọ bụ hazie onye ọrụ, nwee ike ịkpọ ekwentị ndị ama ama. kọntaktị ndị ọzọ ahụ na ịntanetị.
Callsnata ọnụego ọnụego sitere na ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ na mkpanaka ahụ, yana ịkpọ oku site na mkpanaka site na iji ọnụọgụ nke ụlọ ọrụ nwere ọnụego maka ya, emeghị nke ukwuu, mana ọ bụ otu n'ime uru dị ukwuu nke telefon IP a na-emeghebeghị. Ruo ugbu a.
Daalụ maka okwu gị! O doro anya na ụdị nke ikesa ọdịnaya ahụ gaa na mbipụta 2 agaghị adị njọ ma ọlị, ọ na-ewute m na m lebaraghị ya anya otu ahụ.
Ọ bụ ezie na echiche ahụ bụ nanị iji kpọọ aha na mkpụrụ okwu ụfọdụ nke ọtụtụ ndị amaara na ndị ọzọ abụghị nke ukwuu, n'ihe gbasara nyiwe nkwukọrịta.
Ma maka mgbanaka, mgbe ahụ ihe ị gbakwunye dị mma. Agbanyeghị, e nweela ezigbo ederede na Ring na Blog. M na-agba gị ka ị gụọ ya, ọ bụ ezie na ọ dịbeghị ọhụrụ: https://blog.desdelinux.net/ring-un-sustituto-de-skype-en-gnulinux/
Mercedes Fuentes dijo
Ezigbo isiokwu! Ọnụ ọgụgụ nke mmemme ndị dị iji gosi nkwupụta okwu na-adọrọ mmasị! M na-arụ ọrụ AKWKWỌ anyị na-elezi anya na nyocha na nyocha nke ngwanrọ dị iche iche dị mma na ebumnuche, yabụ echere m na isiokwu gị dị mma. Na weebụsaịtị anyị, na mgbakwunye na ọtụtụ n'ime ndị dị na akụkọ gị, akpọrọ mmemme ndị ọzọ dị ka REVE nkata na Freshchat dịkwa mma, ọkachasị maka gburugburu ebe azụmahịa. Banyere.
Zaghachi Mercedes Fuentes
Daalụ maka okwu gị na onyinye nke ngwa 2 ndị ọzọ ahụ.
QOwnNotes: ederede ederede na nkwado maka mmekọrịta na ọrụ igwe ojii
VNote: A Vim sitere n'ike mmụọ nsọ Markdown Note Inweta App